गर्भावस्था र यौन सम्पर्क :: डा. ज्योती अग्रवाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा. ज्योती अग्रवाल शनिबार, जेठ ४, २०७०, १८:५९:००
गर्भावस्थामा महिलालाई धेरै किसिमका समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यसैले गर्भावस्थामा नियमित रूपमा स्वास्थ्य परिक्षण जरूरी पर्छ। यसबाट सम्भावित जटिलतालाई कमगरी गर्भ खेर जानबाट बचाउँन सकिन्छ। गर्भावस्थामा पोषणको कमीले पनि धेरै समस्याहरू देखिन सक्छन्। सरसफाईको अभाव पनि गर्भावस्थाको समस्याको रूपमा देखा परेको छ। गर्भावस्थाको सुरुमा बान्ता हुनुलाई सामान्य समस्या भनिन्छ भने रक्तश्राव भएको अवस्थालाई जटिल समस्या पनि भनिन्छ। रक्तश्राब भएमा बच्चा बिग्रने सम्भावना ५० प्रतिशत हुन्छ। त्यस्तै गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रक्तअल्पत्ता, जण्डिस जस्ता समस्या देखिने गर्दछन्।
गर्भावस्थामा रगत बगिरहेको छ भने त्यसलाई जटिल अवस्थाको रूपमा लिइन्छ। यदि जुम्ल्याहा बच्चा छ भने पनि जटिल अवस्था सृजना हुनसक्छ। गर्भवती महिलामा प्रेसर, सुगर र जण्डिस देखिएमा जटिलता निम्तिन सक्छ। त्यसैले गर्भवतीको स्वास्थ्यमा धेरै ख्याल राख्नुपर्छ। गर्भावस्थाको अर्को जटिलता भनेको गर्भमा बच्चा उल्टो बस्ने, बच्चाले दिशा खाने, घाँटिमा साल बेरिनेलगायतका हुन्। यस्ता समस्याको पहिचानका लागि भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ। कहिलेकाँही गर्भ पाठेघरमा नबसी ट्युब वा अण्डाशयमा पनि बस्न सक्छ। यसलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सि भनिन्छ। सामान्य अवस्थाको गर्भमा पाठेघरको मुख गर्भावस्थाभर बन्द रहन्छ। तर गर्भावस्थाको तेस्रो महिनापछि पाठेघरको मुख खुली गर्भपतन हुनसक्छ। यसबाट पनि सचेत रहनुपर्छ। गर्भावस्थामा डिप्रेसनको समस्या पनि देखिने हुनाले यसप्रति परिवारका सदस्यहरु सजग रहनुपर्छ।
गर्भमा रहेको बच्चा जन्मने अवधि नपुग्दै खेर जानुलाई गर्भपतन भनिन्छ। तीन जना गर्भवतीमा एकजनाको गर्भपतन हुने गर्दछ। कतिपय अवस्थामा थाहा नपाई पनि गर्भपतन हुने गर्दछ। अझैपनि गर्भपतन भएका पाँच जना मध्ये दुई जनाको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। उमेर बढी भएका महिलामा गर्भपतन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै मधुमेह, कलेजो रोग, हार्मोनको असन्तुलन, रोगको संक्रमण, धुम्रपान, मद्यपान, असुरक्षित यात्रा आदिले पनि गर्भपतन गराउन सक्छ। २५ प्रतिशत गर्भपतन क्रोमोजोनल डिफेक्टले पनि हुन्छ। क्रोमाजोनल डिफेक्ट अण्डासय वा शुक्रकिटको खराबीले हुन सक्छ। कहिलेकाहिँ कामको लोडले पनि गर्भपतन हुनसक्छ।
गर्भपतन भएको तीन महिनापछि गर्भधारण गर्न सकिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म गर्भधारण गर्न नहुने अवस्था पनि हुनसक्छ। यसका लागि गर्भधारण पूर्व प्रसुतिरोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। समयमै ध्यान पुर्‍याउन सके पुनः गर्भपतन हुने सम्भावना कम हुन्छ।
पटकपटक गर्भपतन भएकाहरूले गर्भ रहेको सुरूको तीन महिना र अन्तिमको एक महिना यौन सम्पर्क राख्नै हुँदैन। अन्य समयमा सावधानी पूर्वक यौनसम्पर्क राख्न सकिन्छ। अन्य सामान्य अवस्था भएका महिलाको पनि तर यौन सम्पर्क राख्दा पेट थिच्नु हुँदैन। तर कुनै गर्भवतीको सालनाल तल छ, कुनै किसिमको इन्फेक्सन छ अथवा पहिला बच्च खेर गएको छ भने गर्भावस्थाभर यौन सम्पर्क नराख्नु नै उचित हुन्छ।
गर्भवती अवस्थामा लामो समयसम्म पेट खाली राख्नु हुदैन। खाना एकैपटक धेरै नखाई पटक÷पटक थोरै पोषिलो खाना खानुपर्छ। गर्भावस्थामा अमिलो पिरो खान मन लागेपनि खानु हुँदैन। अमिलो पिरो खानाले ग्याष्टिक हुने र वान्ता हुने गर्दछ। प्रोटिनजन्य खाद्य पदार्थ बढी मात्रामा खानुपर्छ। जसमा गेडागुडी, दुध, दही, माछा मासु, अण्डा, हरीया सागपात, ताजा फलफूल प्रसस्त खानुपर्छ। कब्जियत हुन नदिनका लागि झोल कुराहरु बढी मात्रामा खानुपर्छ। गर्भावस्थामा आइरनको मात्रा बढी चाहिने हुनाले सागसब्जी बढी खानुपर्छ। गर्भावस्थामा धुम्रपान, मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नुहँुदैन। यसले आमालाई मात्र होईन बच्चालाई पनि असर गर्दछ।
- डा. ज्योती अग्रवाल, स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ